Kilalao Tsara Indrindra: Ny Tsipelina sy ny Fahatsiarovana - Trano fividianana finday
Ao amin'ny tontolo maoderina, misy ny fanamafisana ny fianarana sy ny lanjany, ary tsy misy manontany an'izany fomba fisainana izany. Tsy misy isalasalana fa tokony hampiasa vola be isika amin'ny fampiofanana tsara ny zanatsika ary hevitra tsara ny manomboka haingana araka izay tratra.
Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny ankizy dia milalao - izany fotsiny ny fomba fiainany, ny fianarana ary ny fifandraisany amin'ny tontolo, ary koa mety ho fotoana ahafahana mianatra fahalalana azo tsapain-tanana. Ny kilalao fanabeazana dia be dia be sy misy vokany tsara satria manao fianarana mahafinaritra, milalao ary tsy tonga enta-mavesatra ho an'ny ankizy. Ny tsipelina dia iray amin'ireo fahaiza-manao ilain'ny olona tsirairay eo amin'ny fiainany, ka androany dia hijery ireo vokatra tena tsara isika izay mamela ny zazakely hianatra taratasy sy hanatsara ny fitadidiany teny an-dalana.
Benefits amin'ny kilalao fanabeazana
Ankizy tia ny pnandry - Araka ny efa nolazainay, ny ankizy dia tia milalao; mihoatra noho izany-ny fomba fiainany. Ny fifindrana sy ny fikitihana ireo zavatra ireo dia ny fomba fandalinany ny tontolo manodidina azy ireo toy ny zazakely, ary rehefa manakaiky ny taonany izy dia manomboka milalao amin'ny fitaovana antsointsika kilalao. Tena zavatra voajanahary ho azy ireo izany ary manome azy fahafahana hianatra zavatra amin'ny alalan'ny kilalao ananany.
Fivoaran'ny IQ - Mety ho feno fahafinaretana ny miparitaka manerana ny fasika, saingy ny fampiasana kilalao fanabeazana dia mety hahasoa ny fivoaran'ny saina ara-tsaina. Ny fanabeazana, indrindra ny kilalaon-teny dia manolotra ankizy ho amin'ny fahaiza-mamaky teny, manohitra ny fahaizan'ny môtô ary manatsara ny fahaizan'izy ireo tsianjery. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra dia afaka mandinika ny kilalao ampiasain'izy ireo ny ankizy, lasa mahay kokoa amin'ny lalao, ary mahazo fahatakarana tsara kokoa azy ireo, izay mety hahatonga ny ambaratonga IQ bebe kokoa.
Mampivoatra fahaiza-manao sosialy - Ny kilalao fanabeazana dia tsy vitan'ny mianatra vaovao vaovao ihany, fa afaka mahazo tombony amin'ny fandrosoana ara-tsosialy ihany koa. Maro amin'ireo karazana kilalao ireo no natao ho an'ny mpilalao mihoatra ny iray, ary ny fananana tovovavy iray milalao miaraka amin'ny namana dia afaka mampianatra azy ireo momba ny fizarana, fiaraha-miasa, hifandimby, sy ny sisa. Ireo dia fahaiza-manao tena sarobidy hampiharina mba hahatonga azy ho lasa olon-dehibe.
Kilalao fanabeazana mahaliana ny ankizy - Ny ankizy dia mianatra amin'ny karazan-javatra samihafa - ny sasany dia mihetsika kokoa amin'ny fomba manintona ary ny hafa dia kinetsy, ka ny iray dia tsy mihatra amin'ny rehetra. Hitanao hoe inona no mety hahaliana ny zanakao, ka hanampy anao hisafidy ny kilalao fanabeazana mety ho azy ireo, izay mety hampirisika azy hianatra / hianatra bebe kokoa, satria fotsiny hoe mahaliana azy io.
Inona no hikaroka kilalao fanabeazana
Ny fikarakarana ny kilalao mety ho an'ny zanakao dia mety ho toy ny asa mora, fa tsy misy afaka manalavitra kokoa ny fahamarinana. Raha miditra toeram-pivarotana kilalao na sehatra manokana ao amin'ny fivarotana lehibe izy ireo, ny ankamaroan'ny olon-dehibe dia tsy afaka manampy fa mahatsiaro ho tototry ny safidy manintona sy ny fanolorana ireo karazana vokatra ireo.
Ny tsenan'ny zazakely dia lehibe iray, ary be dia be ny kilalao fanabeazana tsy tapaka izay tsy mitsaha-mitombo hatrany, noho izany dia mety ho toa tsy ho vita ny fisafidianana iray. Mba hanampiana anao amin'izany, dia namorona lisitr'ireo zavatra tokony ho fantatrao ianao fa afaka manampy anao amin'ny safidinao.
Taom-panolorana - Zava-dehibe ny mahatsapa fa tsy ny kilalao fanabeazana rehetra dia mety ho an'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra. Ny antony mahatonga izany dia mety tsy mitovy, ohatra, ny vokatra sasany dia mety manana faritra madinika izay afaka manolotra risika mitebiteby ho an'ny ankizy madinika. Ny faharetan'ny taona dia voasoratra ao anaty fonosana mba ahazoana antoka fa hijery izany aloha alohan'ny hividianana kilalao.
Jereo ny fitenin'ny kilalao - Na dia misy soso-kevitra eo amin'ny boaty aza, dia diniho ny fahasamihafana amin'ny fiteny ampiasaina amin'ny lalao famaritana. Indraindray dia mitranga ireo teny ireo ho sarotra loatra raha takatr'ilay zaza izay tsy mahasoa ny lalao amin'ny farany.
Eritrereto ny zavatra mahaliana ny ankizy - Toe-javatra manan-danja tokony hodinihina izany. Eritrereto ireo asa aman-draharaham-pahaizana izay tiany ho an'ny zanakao rehefa mifidy kilalao ho azy ireo, ka hitombo ny fahafaha-misafidy izay tiany sy tiany. Ohatra, raha tia mozika ny zanakao, dia asehoy azy ireo kilalao izay misy feo na hira mifandray amin'ny zavatra sasany toy ny alfabeta.
Inona no tianao hampiasana ny zaza? - Diniho tsara ny kilalao mba hahitana ny karazana fandraisana anjara sy ny asa izay takiany amin'ny ankizy. Ny kilalao tsipelina sasany dia mitaky ny ankizy hanoratra zavatra, ka izany dia hanatsara ny fahaizany manoratra sy ny fahaiza-manao. Ny kilalao sasany dia mangataka ny ankizy hametraka zavatra any amin'ny toerana mety, fa ny hafa kosa dia manolotra bebe kokoa ny lalao maimaim-poana.
Vakio ny tsikera sasany - Ny orinasa izay manao kilalao fanabeazana dia manao izany amin'ny fikasana hanampy ny ankizy hianatra zava-baovao, fa koa mba hahazoana tombony, noho izany dia mety tsy ho tena zava-kendreny sy marina ny dokam-barotra. Mba hanampiana anao hianatra bebe kokoa momba ny tena fahaiza-manao sy vokatra azo avy amin'ny vokatra, dia tsara ny mamaky hevitra sasantsasany, na ao anaty aterineto na ao amin'ny gazetin'ny fitaizana ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny dia tsy manana fandaharam-potoana afa-tsy ny mahasoa ny zanany, ka azonao antoka fa ny ankamaroan'ny fotoana, ny asa sorany dia tso-po.
Warranty - Na dia manamboatra ny kilalao aza ny mpanamboatra ao an-tsaina fa hampiasa azy ireo ny ankizy iray, na dia mety ho tapaka aza ny sarotra indrindra amin'ny vokatra. Raha toa ka tsy avo loatra ny vidiny, dia tsy mila manahy momba izany ianao fa mahafantatra fa ny gadget pricier dia tokony hahazo antoka. Raha toa ka mitranga izany dia ny zanakao no mamoaka ny kilalao eny am-baravarankely amin'ny andro nividiananao azy, dia ho afaka hahazo solon'anarana ianao.
Fanamboarana 5 tsara indrindra sy kilalao fanadinana fanadinana - Ny Fanamarihantsika
1. Lalao mifanitsy amin'ny lalao
Ity kilalao ity dia asaina ho an'ny ankizy mpiara-mianatra amin'ny 3 taona sy tapany, izay tokony tsara, efa manana fahalalana fototra momba ny abidy.
Ny teny ato amin'ity lalao ity dia 3 hatramin'ny litera 4 efa ela, noho izany dia azonao antoka fa tsy misy fiteny feno sarotra ampiasaina eto.
Toy izao no ataon'ilay kilalao. Misy valo kilaometatra miaraka amin'ny taratasy eo amin'ny andaniny tsirairay, karatra 30 miaraka amin'ny sary sy karatra 60 miaraka amin'ny teny. Ny ankizy dia mametraka karatra eny ambony farafara iray ary avy eo, amin'ny fampiasana ny cubes, dia manala ny teny na ny zavatra hitany eo amin'ny sary.
Io kilalao io dia afaka manampy ny ankizy hitazona ny abidia ary hanatsara ny fahaizan'ny mari-tsoratra amin'ny alalan'ny lahatsary mahaliana sy mahaliana. Ankoatr'izany, ny fizotry ny maso-maso dia hosedraina sy henjana, ary koa ny fifantohana sy ny sain-kevitra ara-pôlitika, izay mety hisy fiantraikany tsara amin'ny fahatsiarovan'ny zazalahikely iray.
Ny fahitana ity kilalao ity dia natao ho an'ny olona mihoatra ny iray, mba hahafahan'ny ankizy hankafy izany miaraka amin'ny ray aman-dreny na namana. Amin'ny fanaovana lalao any anaty orinasa dia afaka manatsara ny fahaiza-manaony sy ny fiaraha-miasa.
Noho ny tsy fahampian'ny vokatra, dia tsy misy ny fiantohana mpamokatra.
Afaka milalao ankizy maro kokoa
Hafatra voafetra maromaro azo atao
Tsy misy fiantohana
2. Jereo & ampitahao ny lalao fanabeazana an-trano
Jereo & Spell dia kilalao fanabeazana noforonin'ny orinasa Melissa & Doug, ary tonga lafatra ho an'ireo ankizy izay manana lalao malaza sy maso.
Ny fanolorana taona ho an'ity kilalao ity dia efa-taona sy tapany, satria ny litera kely dia mety hiteraka fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny ankizy madinika.
Raha ny momba ny lalao dia sahala amin'ny hoe: Ao anaty boaty hazo tsara tarehy dia hahita boaty hazo roapolo misy sarin-javatra iray sy efamira ho an'ny taratasy isaky ny andaniny. Ireto manaraka ireto dia misy litera manintona izay mety ho azo ampiasaina amin'ny toerana eny amin'ny boards mba hanoratana teny telo sy efatra. Ny ankizy dia mampiasa ny litera hamaranana piozila iray ary manorata ny teny aseho eo amin'ny sary.
Ankoatra ny fampiasana ny abidia, ny ankizy dia hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny sary sy ny teny voasoratra. Noho ireo toerana malalaka ho an'ny taratasy dia tsy misy toerana ho an'ny fahadisoana, ary izany dia hampianatra azy ireo tsipelina marina.
Ny zavatra tsara momba ny See & Spell dia ny hoe afaka milalao azy kokoa ny ankamaroan'ny ankizy izay midika fa afaka manao asa sosialy lehibe izy io.
Ny mpanamboatra dia manome fiantohana mandritra ny androm-piainana amin'ny fahasimbana, izay fifanakalozan-kevitra tsara dia tsara amin'ny fiheverana ny vidiny ambany amin'ny vokatra.
Mora ny milalao
Fiantohana amin'ny fiainana manohitra ny fahavoazana
Ny teny 16 ihany no manonona
Ny mpampiasa sasany dia nitaraina fa tsy mifanaraka amin'ny teny ao amin'ny boards ny sary
Ny vokatra avy amin'ny orinasa LeapFrog dia kilalao fanabeazana mahaliana izay manolotra fahafaha-mianatra maro be - eo am-baravaran'ny efitranonao!
Ny fanoloran-tenan'ny mpamorona ny taona 2-5 dia mandinika tsara ny haben'ireo taratasy alohan'ny handraisana ity kilalao ity ho an'ny roa taona anao. Tsy dia kely loatra ny zavatra ary mety hampidi-doza ny ankizy kely.
Ny kilalao dia misy angona taratasy 26 izay azo apetraka eo ivelan'ny efitranony ary ampiasaina amin'ny endriny maro tsy misy endriny. Ankehitriny, ny tombontsoa tena marina amin'ity vokatra ity dia ny fitaovana elektrônika fitaterana boribory izay ahafahana mametraka ireo taratasy, izay mamoaka feo manoritsoritra ny feon'ilay taratasy ary manome ohatra amin'ny fampiasana azy. Izany dia fomba lehibe ahafahan'ny ankizy mianatra ny toetra fonosin'ny alfabeta manontolo.
Ny kilalao fiara fitaterana koa dia ahitana ny "Alfa song" sy "Wheels ao anaty fiara fitaterana", ka ireo ankizy kely dia afaka mihira miaraka aminy.
Ny tanjaky ny vokatra LeapFrog dia ny hoe ny anarana sy ny feo dia azo ampiasaina sy hivoatra amin'ny alalan'ny fomba amam-pihetseham-peo sy am-pihetseham-po miaraka amin'ny voambolan'ny ankizy.
Ny orinasa dia manolotra fepetra 3 volana ho an'ny fahavoazana, ary raha misy mahamarika dia azo havaozina ny kilalaoo.
Manana fahaiza-mozika sy feo izy io
Volana 3 volana
Mety tsy mety ho an'ny karazany ambany taona 3
Ny hatsaran'ny feo dia tsy tsara
Ity misy kilalao hafa avy amin'i LeapFrog, ary amin'ity iray ity dia ampidirin'ny zaza hanoratra amin'ny alalan'ny fomba fampianarana fianarana.
Rehefa tonga ny taonany, ity kilalao ity dia asaina ho an'ny ankizy 3 taona sy mihoatra. Satria tsy faritra kely izy ireo, tsy misy ny risika miteraka, ary ny hany loza mety hitranga mety ho ny penisitra.
Toy izao no ataon'ilay kilalao. Misy birao elektronika ahitana albabota sy isa (1-10), ary koa toerana iray ahafahana manoratra amin'ny penina manokana mifandray amin'io fitaovana io. Ny ankizy dia afaka manindry bokotra amin'ny safidiny, ary izy ireo dia hanoratra torolàlana amin'ny feo sy ny jiro mirehitra ao amin'ny biraony. Ny ankizy dia manaraka ny lalan'ny jiro miaraka amin'ny pen ary manoritsoritra ny taratasy na ny isa araka ny tokony ho izy. Aorian'izany, afaka manaisotra ilay soratra ny ankizy ary manomboka.
Tena tsotra ny fampiasana azy, ary afaka manampy ny ankizy hahatsapa ny fahatsapana fihazonana penina sy hampihatra ny asa fanoratana. Ny hany tokana ahiahiana dia ny hampiharihary ny fizotran'ny fanoratana ny torolàlana, ka tsy voatery mahatsiaro ny endrik'izy ireo ny ankizy.
Misy antoka maimaim-poana amin'ny 3-volana amin'ity kilalao ity, ary azonao atao ny mahita antsipirihany momba izany ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa.
Tsara ho an'ny fanoratana voalohany
Mety hanamaivana ny fizotran'ny fanoratana izany
5. Mianara midinika sy mianatra asa
Ny biraon'ny Activity VTech dia tena azo antoka indrindra ny kilalao fanabeazana indrindra amin'ny lisitry ny fanavaozana. Manolotra fomba maro momba ny fianarana izy ary azo antoka fa manana zavatra ho an'ny ankizy tsirairay.
Izy io dia atolotra ho an'ny zaza roa taona na mihoatra, ary tsy misy na inona na inona momba an'io kilalao io izay mety hanimba loza.
Ny birao dia manana fampisehoana maivana izay mampiseho taratasy sy tarehimarika ary ny fomba hanoratana azy ireo araka ny tokony ho izy. Misy koa mpilalao mozika miaraka amin'ny hira 20 samihafa ary telefaona kilalao ho an'ny fampiasana tarehimarika. Ny sehatra ambony ao amin'ny birao dia ampiasaina mba hametrahana ireo pejy fanentanana elektronika izay mandrakitra ny lohahevitra samihafa - matematika, siansa, mozika, sns. Misy pejy dimy miaraka amin'ny vokatra, fa afaka mividy bebe kokoa raha tianao. Rehefa mihalehibe ny zaza, dia azo vidiana ny kitapo fanitarana vaovao izay ahitana fitaovana sy fanamboarana sarotra kokoa.
Rehefa manandratra ny tampony ambony ianao, dia mahita toerana malalaka ho an'ny pejy etsy ambany. Ny ampahany ambany amin'ny birao ihany koa dia azo ampiasaina ho bord na tsangatsangan'ny zavakanto.
Ity kilalao ity dia tena tsara ho an'ny fianarana mialoha amin'ny sehatra samihafa, ary afaka manatsara ny abidim-pianaran'ny ankizy sy ny fahaiza-manao ny teny, mamela azy ireo hilalao, ary hampianatra azy ireo momba ny lafiny maro eto amin'izao tontolo izao.
VTech dia manome antoka maimaim-poana amin'ny 3 volana amin'ny daty fividianana.
Azo ekena ny fampivelarana sy ny fandaharam-pampianarana fampianarana
Ny ankizy dia afaka mampiasa fomba isan-karazany
Manana fiantombohan'ny 3-volana fotsiny ihany
Famaranana & Our Recommendation
Noho izany, aorian'ny famerenana ny sasantsasany amin'ireo kilalao tsara indrindra sy malaza amin'ny fanoratana sy ny fahatsiarovana dia nanatsoaka hevitra izahay fa ny vokatra tsara indrindra amin'ny lisitr'ity andro ity dia ny VTech Activity Desk. Ny fanapahan-kevitra dia mora ny manao izany, ary ity kilalao ity dia manjavozavo sy mavitrika ka tsy misy vokatra hafa mety mifanaraka amin'izany. Ny fahafaha-mianatra azon'ilay tolotra momba ny asa atao dia tsy voafetra amin'ny taonan'ny ankizy ary afaka hivoatra mba hahafahan'ireo ankizy mahazo fanamby tsy tapaka. Tsy mampianatra sora-baventy ihany izy io, fa ahitana karazana loha-hevitra samihafa ao amin'ny pejy fandraisany izay mahaliana sy mahasoa ny fivoaran'ny zaza.